वैदेशिक रोजगारीको कथा 'अमेरिका ब्वाइज' [टिजर हेर्नुहोस्] | Tv Sansar
फिल्म ‘अमेरिका ब्वाइज’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। प्रवेश पौडेलको निर्देशन रहेको फिल्मको सार्वजनिक ट्रेलरमा फिल्मको कथासार र पात्रको लुक्सलाई देखाइएको छ। बड्डी इन्टरटेन्मेन्ट र सिबर्ड पिक्चर्सको ब्यानरमा निर्माण भइरहेको फिल्मले वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई उठान गरेको बताइएको छ।
निर्माण युनिटले यसअघि वैशाख १४ लाई रिलिज मिति तय गरे पनि सो मिति परिबर्तन गर्दै नयाँ प्रदर्शन मिति तय गरेको छ। यो फिल्म अब जेठ १८ मा आउने भएको छ । फिल्ममा अर्पण थापा, सृष्टि कार्की, सन्दिप क्षेत्री, कामेश्वर चौरासिया, सुनील थापा, हरिहर शर्मा, अभय बराल, मनीष राउत, रुबि राना, सुवास गजुरेल लगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन्।
प्रकाश भुजेल कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा विवेक पाण्डेको कथा, आलोक शुक्लाको छायांकन तथा दीपक आरजे र जयन जे वाइबाको संगीत रहेको छ। कमेडी जनराको फिल्मलाई दर्शकले रुचाउनेमा निर्माण पक्ष आशावादी देखिएको छ।
नायिका निता बेडरुममा एक्लै हुँदा के के गर्छिन् ?
अनमोल, प्रदिप र गर्लफ्रेण्डको बारेमा मिडियामाझ बोले सलोन
‘गाजा बाजा’को ट्रेलर मा के छ ?
‘लम्फू’ दोश्रो गीत रिलीज, मरिश्का परिन् दोधारमा
‘टेन्सन फ्रि’ मा श्वेता खड्का । वेब सिरीजीको पोस्टर सार्वजनिक
मौसम र रेजिनाको ‘आशुँको पोखरी’मा डुबे दुर्गेश र सगुन
पल शाह र सन्ध्या केसीको रोमान्स! कति सुहायो त जोडी ?
अनमोल केसीको डान्स हिट !
बिश्व नेपालीको ‘तिरी किटी ताका’ । फरक शैलीको म्युजिक भिडियो
Kantipur TV announces HD transmission
Nepal’s beautiful ‘vegetable seller girl’ becomes viral on social medias